Laga xaday Badda: Macnaha ay Saiko u tahay Afrika
Ghana waa goobtii ugu dambaysay ee ka jira la dagaalamka kaluumaysiga xad-dhaafka ah ee Afrika, halkaas oo maraakiibta shisheeye si sharci darro ah la dagaalamaan doomaha yar yar ee maxaliga ah, kasoo saameeya hab-nololeedyada maxalliga, kaydka cuntada, iyo suurtogal ah in qaranku ku waayo in ka badan $ 200 milyan sannadkii.
Dagaalka loogu jiro warshadaha kalluumeysiga jilicsan ee Afrika ayaa yeeshay isbedel lama filaan ah bishii Juun 2021 markii Midowga Yurub uu digniin aan horay loo arag (ama 'kaarka jaalaha') u jeediyay Ghana, halkaasoo lagu aqoonsaday sida waddan aan iskaashi lahayn.
Tani waxay sheegaysaa sheekada nuskeeda uun. Markii si caadi ah loo eego, maraakiibta ka hawlgasha Ghana waxaa loo arki karaa inay ka soo horjeedaan shuruucda caalamiga ah ee kalluumeysiga sharci darrada ah, maadaama ay ku kalluumeystaan si sharci la'aan iyo wargelin la'aan ah (IUU). Laakiin xaqiiqadu waa mid aad u adag, oo musuqmaasuqa waa dhibaato mushkilad wayn ku ah Afrika oo dhan.
'Saiko' waxay ku bilaabatay si hab ganacsi oo aan rasmi ahayn oo kalluunka aan la rabin oo ay qabtaan maraakiibta warshadaha kallumeysiga lagu beddelan jiray badeecooyinka ay keenaan doomaha yar yar. In ka yar toban sano, waxay tan isku beddeshay ganacsi aad loo habeeyey, sharci-darro ah iyo faa'iido badan halkaas oo maraakiibta warshadaha kallumeysiga - oo shati ku haysta kaliya inay kaluumaystaan nooc kalluun laga helo badda hoosteeda - ay soo dabaan kalluun gaar ahaan looga baahan yahay ganacsiga saiko.
Tan waxa ku jira kalluun yar yar, oo ay ku jiraan sardinella iyo mackerel, kuwaasoo si aad ah loogu baahan yahay isticmaalka gudaha dalka oo loo kaluumaystay si xad dhaaf ah. Kalluunka la barafeeyay ee kalluunka saiko ayaa markaa laga iibiyaa dadka deegaanka.
Xittaa inkastoo warshadaha kalluumeysiga Ghana ay isku dayayaan in ay abuuraan habab lagu kormeero laguna ilaalinayo xuduudahooda cusub ee kalluumeysiga, waxaa ku yar kheyraadkooda oo waxaa ka awood badan shirkadaha dembiilayaalka ah oo sameyn doonta wax kasta si aan loo ogaan iyo si ay hagar la'aan ah wax soo saar u lahaadaan. IUU iyo kalluumeysiga xad-dhaafka ah waxaa uga sii daray musuqmaasuqa iyo dhaqangelin la'aanta sharciyada, taasoo keentaa in sanadkii Afrika ka lumo dakhli $ 1.3 bilyan ah.
Dadka deegaanka ayaa ku baaqaya ilaalin iyo cunaqabatayn, laakiin go'aaminta ka faa'iidaystayaasha dhabta ah ee faa'iidada laga helo kallumeysiga sharci-darrada ah ayaa kuwan ka dhigaysa kuwa aan waxtar lahayn.
Burburinta kalluumeysiga dhaqameed ee Ghana waxay leedahay cawaaqib aad u fog. Ku dhawaad 200 oo tuulo ku yaala xeebta Ghana, iyo in ka badan 10% ee dadweynaha, ayaa dakhligoodu ku tiirsan yahay kalluumaysiga badda. Dhaqaalaha ballaaran ayaa luminaya malaayiin doollar sanad walba, maadaama suuqyada kalluunka aysan heli karin saamigoodii caadiga ahaa, taasoo hoos u dhigtay tayada iyo qiimaha.
Kalluumaysiga sharci-darrada ah oo aan muujinayn calaamado hoos u dhac ah, socdaalka ballaaran, qiimaha cuntada oo sarreeya iyo kacdoonka bulshada ee xeebaha ayaa u muuqda inuu kor u kici doono.
Waxaa rajo ka jirta warshadaha kalluumeysiga jilicsan ee Galbeedka Afrika. Dalalka sida Ghana iyo Senegal hadda waxay leeyihiin hadaf labada dhinacba faa'iido u leh, iyo cadow guud. Marka la helo taageerada saxda ah iyo cunaqabataynta, waxaa laga yaabaa in weli la heli karo waqti lagu xalliyo dhibaatada.
Kaymaha cagaarka ah ee ka haray Itoobiya Hadda aqri
Hydroponics: Habka cusub ee Afrika ee beerashada mustaqbalkaHadda aqri
Haydarojiinka degaanka u fiican: Fursada ugu wanaagsan ee Afrika inuu ku shidaaleeyo mustaqbalkiisa cagaaran?Hadda aqri
Kalluumeysiga xad dhaafka ah iyo sida looga hortagoHadda aqri
Warar Mudan In La Ogaado.
Kooxdeena waxay indhahooda fiiro-dheerka ah saaraan sheeko, dhacdo iyo fikrad kasta. Isku-dubbaridka iyo soo-bandhigidda warar wax-ku-ool ah ee cusub hab la kala furfuray, balse aan waligood la khafiifin.
Caalami, qaran, maxalli ah - haddii u war muhiim yahay, waxaad ka helaysaa Africa Verified.
Qoraal ku toosan qorayaasha maqaalka
Africa Verified waa madal warbaahineed oo uu kafaalo qaado Mareykanka. Naqshadaynta mareegaha © Africa Verified 2022. Xuquuqda oo dhan way xifdisan tahay.